Nyocha GP90: ezigbo arụmọrụ maka naanị € 120 | Akụkọ akụrụngwa
John Louis Groves | | Nyocha
Mgbe ogologo oge gbalịrị ime ule dị ka nke a, anyị mechara nweta ohere na ihe ngosi, nke megidere ihe ị nwere ike iche n'echiche tupu ị kwadoo ịzụta ya, dị ike ma na-atọ ụtọ karịa ka ị nwere ike iche n'echiche, ọ bụghị ịkọwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ịzụta maka onye ọ bụla chọrọ ịnwale otu n'ime ngwaọrụ ndị ahụ tupu launching n'ime zuo nke kere site a ọtụtụ ihe ndị ọzọ mba ghọtara ika.
Tupu ịmalite inyocha ihe niile na ihe ndozi dị ka GP90, Ọ ga-amasị m imesi ike ihe dị iche na ngwaahịa a na ndị asọmpi ahụ ebe ọ bụ na ụdị dị ka JVC, Sony ma ọ bụ Epson, atọ n'ime ụlọ ọrụ ndị egwuregwu ha so n'ime ndị a kacha mara amara n'ahịa, ha nwere ọnụahịa nke nkezi dịkarịrị ala karịa 3.000 euro, na oge obere GP90 nwere ike ịbụ nke gị naanị n'okpuru euro 200, na-ekwu maka ọnụahịa gọọmentị, na-enweghị ego. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ya na ego, ị nwere ike zụta ya ebe a naanị only 119 dịka anyị ga-egosi na ngwụcha nyocha a.
1 Ọrịa a na-arụ ọrụ ma na-adọrọ adọrọ
3 GP90 projector nwalere
Ọrịa a na-arụ ọrụ ma na-adọrọ adọrọ
Otu n'ime ihe na-atọ ụtọ nke ọrụ a bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọmarịcha mma ya. Ngalaba ebe ndị na-emepụta ụlọ ọrụ rụsiri ọrụ ike na nke ahụ nwere ike ịbụ otu n'ime ihe kachasị ike mere ọtụtụ ndị ọrụ ji emesị họrọ onye nyocha a karịa ndị ọzọ nwere ụdị njirimara ị nwere ike ịchọta n'ahịa.
N'oge a, tupu ịga n'ihu, anyị ga-eburu n'uche na anyị na-ekwu maka ngwaahịa nke ọnụahịa ya dị obere karịa euro 200, ihe na-eme ihe eji, n'agbanyeghị eziokwu na ha na-eweta ihe zuru oke zuru oke ma dị mma mee ka anyị nwe obi abụọ banyere otu ha ga-esi diri ogologo oge.
Na-elekwasị anya nwa oge na mpụga aesthetics, anyị na-ahụ ikpe mere kpamkpam nke plastic na a nnọọ mma aka. N'elu ya anyị na-ahụ ozugbo bọtịnụ a na-ahụkarị iji chịkwaa ikike projector yana nhọrọ nhọrọ dị iche iche, isi iyi nke anyị chọrọ igwu egwu ... N'ihu, mpaghara ebe nnukwu lens dị, kwụpụtara. maka ụda ọlaọcha ya, nke gosipụtara ọdịiche dị iche na nke ọzọ nke ikpe na ojii. Ọ bụrụ na anyị gaa n'otu akụkụ ya, anyị ga-ahụ wiilị ndị ahụ iji melite nkọwa nke ihe oyiyi ahụ, ugbua na azụ, chọta ikike na Ntinye RCA, USB, HDMI ma ọ bụ VGA.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a bụ ihe ngosipụta dabara adaba maka ojiji n'ụlọ ọ bụla ekele maka njikọ ya na ike ya. Nke mbụ, ị ga-eburu n'uche ihe anyị na-ekwupụtabeghị na ọ bụ oke nhapụta ihe nyocha, ihe anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe ịzụrụ ngwaahịa dị ka nke a. N'oge a, GP90 na-apụta maka ya 28 centimita n'ihu, 22 centimeters miri na 10 centimeters elu.
Ọ bụrụ na anyị abanye na ngalaba ọrụaka, eziokwu bụ na anyị na-eche ihu ngwaahịa na-atọ ụtọ na-enweghị mgbe ọ bụla chọrọ ịbụ onye kachasị mma na ahịa ma ọ bụ ịsọ mpi na nnukwu ụdị. Ihe atụ anyị nwere na gị iche ọdịiche ebe anyi zutere a 10.000: 1, iji nye a ezigbo mkpebi nke 1200 x 800 pikselụ nwa afọ ọ bụ ezie na, site na ngwanrọ, enwere ike ibute mkpebi a ruo 1920 x 1080. N'aka nke ọzọ, agba ndị ahụ gosipụtara nke ọma na nha ọkụ ọkụ na agba ọkụ 3.200 ọkụ.
N'akụkụ a, a ghaghị iburu n'uche na projector na-onwem na oriọna nke na-arụ ọrụ ndụ nke 30.000 awa. Iji mee ka nke a pụta ìhè, gwa gị na nkezi a na ikiri ihe nkiri kwa ụbọchị maka ihe dị ka afọ 40. N'akụkụ a, eziokwu bụ na echeghị m na ọ ga-adaba adaba itinye ọnụ ọgụgụ ebe ọ bụ na, n'ọtụtụ ikpe, ha enweghị isi, yabụ, m ga-achọ ilekwasị anya na nsonaazụ ndị anyị nwetara n'oge ule ahụ.
GP90 projector nwalere
Iji mepụta nnwale anyị, na-eburu n'uche njirimara nke ngwaọrụ ahụ, anyị achọghị iji teknụzụ kachasị mma anyị nwere, mana ịnwa ịmegharị ọtụtụ mpaghara ụlọ. N'iburu nke a n'uche, gwa gị na maka ule ahụ, anyị ejirila sistemụ dị iche iche dịka laptọọpụ, ihe njikwa emana na UHD Blue-ray ọkpụkpọ, na-achọsi ike inweta, n'agbanyeghị ike dị iche iche na vidiyo dị mma ewepụtara na sistemụ ọ bụla, ma ọ bụ obere otu ihe ahụ.
Anyị na-amalite ule site na ịpị igodo ike ihe ngosi, mgbe ị mechara ihe a, ọ malitere na obere sekọnd. Ozugbo anyị nwere ike ịhụ onyogho anyị ga - eji bọtịnụ dị n'akụkụ iji dozie nkọwa nke onyonyo ahụ. N'oge a, n'ihi na ntuziaka projector ukpụhọde, bụ ebe anyị nwere ike ịchọta nsogbu kachasị ukwuu ebe ọ bụ na ọ dịghị mfe ime ka onyinyo ahụ pụta nke ọma. N'ezie, ihe a niile dabere na ndidi anyị na nghọta anyị mgbe anyị na-atụgharị ụkwụ anyị.
Ozugbo onyonyo a gbanwere ka ihe masịrị anyị, ihe nwere ike iwe anyị obere oge ma ọ bụ ogologo oge, dabere na nghọta na uto, nsonaazụ ya mara mma ma dị mma ebe ọ bụ na ihe oyiyi ahụ, n'ozuzu ya, na-adịkarị jụụ. Site na ahụmịhe m, eziokwu bụ na ọ ka mma ịrụ ọrụ na mkpebi nke ihe oyiyi ahụ na usoro ọdịnala yana na ọ bụrụ na anyị atụlee ya, ọ ga-adị ntakịrị.
Nyochaa: John Louis Groves
Ezi oyiyi mma
O nweghi ntinye antenna
O nweghi uzo
Manual mgbanwe ndị
Anyị na-abịa na ngalaba nkwubi okwu, maka m, ma ọ dịkarịa ala n'onwe m, nke kachasị sie ike nke ule ahụ niile ebe anyị ga-enyocha isi ihe niile dị mma nke ngwaahịa dị ka GP90. Nke ahụ kwuru, ọ bụ oge iji nyochaa ihe ngosi a na, n'onwe m, ekwesịrị m ikwupụta na, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na enwere nhọrọ ndị ka mma n'ahịa, ma ha adịghị ole na ole, eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị nyochaa nhọrọ ndị a niile site na ego, anyị nọ tupu otu n'ime ndị kasị akpali projectors ị pụrụ ịchọta taa.
Obi abụọ adịghị ya, ọ ga-abụ nhọrọ ị ga-anwale ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe otu n'ime egwuregwu ndị a iji malite iji ya, lee ihe ọ nwere ike ịnye, mụta maka atụmatụ ya yana otu esi arụ ọrụ na ya. N'ihi nke a, m ga-akwado na, ọ bụrụ na ịnweghị otu ma chọọ ịnwale ya, ị ga-ahọrọ GP90, ọ bụrụ na i nweela ma na-achọ onye nnọchi, ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịnwale ụdị ndị ọzọ usoro zuru oke ma sie ike ọ bụ ezie na, n'aka nke ya, dị oke ọnụ.
Ọ bụrụ n'inweela ule a ma, ọzọkwa, ị nwere mmasị ị nweta otu aka iji hụ n'onwe gị ihe ọ nwere ike, gwa gị taa tom top Ọ nwere ya maka ire ere na mbelata 33%, nke pụtara na ị nwere ike ịnweta otu ihe maka ihe dị ka euro 125, ọnụahịa enwere ike belata Euro 119 ma ọ bụrụ na anyị na-eji dere: AJ5 Gbanyụọ. Pịa ebe a iji zụta ya na ire ere ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nyochaa ihe nyocha GP90, ọnụ ọnụ na-atọ ụtọ
Juan Diego gbara alụkwaghịm dijo
Ndewo, achọpụtara m isiokwu gị na-atọ ụtọ nke ukwuu ma ọ nyerela m aka ịme onwe m obi ike na m ga-azụta projector a. Enwere m ajụjụ ga-amasị m inwe echiche gị maka;
Kedu ngwaọrụ ị ga - azụta itinye android, wifi na bluetooh na igwe nrụpụta? ị nwere ike ịkwado m ọ bụla?
Zaghachi Juan Diego suarez pedraza